Sida loo ogaado haddii ay gabadhu ku jeceshahay - Tilmaamo ku saabsan Ragga Casriga ah | Ragga Stylish
Sideed ku ogaan kartaa inay gabadhu ku jeceshahay
Alicia tomero | | nololeedka, Lamaanaha iyo Galmada
Waxaad la kulantay naag aad runtii jeceshahay. Ma tihid faahfaahinta sababaha, laakiin waxaad ogtahay in runtii markii aad la joogtay aad gurigaaga aado oo aad ku soo laabato adoo dhoola cadeynaya. Waxaad u maleyneysaa inay qurux badan tahay, xiiso leedahay, badanaa waxaad ka fikirtaa iyada Waadna ogtahay in balanbaalisadu ay ka dhex wareegayaan calooshaada Laakiin shakigaaga ayaa ku koobaya maskaxdaada.
Sideed ku ogaan kartaa inay gabadhu ku jeceshahay Waa mid ka mid ah shakiga muuqda. Waxaa laga yaabaa in faahfaahinta muujineysa soojiidashada labadooda aysan caddeyn ama aad u maleyneyso inuu doonayo inuu kula baxo, ama waxaa laga yaabaa inaad u maleyneyso inuu kaliya doonayo saaxiibtinimo fudud. Si aad u ogaato inay gabadhu ku jeceshahay, waa inaad fiiro gaar ah u yeelataa dhammaan faahfaahinteeda af iyo addinba.
1 sidee ku ogaataa inay gabadhu ku jeceshahay
2 Calaamadaha lagu garto haddii aad aniga i jeceshahay
2.1 Muuqaalka weyn
2.2 Weydiiyaa su'aalo iyo qosol joogto ah
2.3 Xiriirka jirka
2.4 Dhaqdhaqaaqyo tilmaamaya inuu adiga ku jecel yahay
2.5 Farriimaha telefoonka
2.6 Luqad aan hadal ahayn
sidee ku ogaataa inay gabadhu ku jeceshahay
Waxaan ku dhex milmaynaa bulshada waxa kaliya ee muhiimka ah dad badan waxay u tahay madadaalo iyo ubax kabax ilaa ubax. Markuu jacaylku si lama filaan ah u soo muuqdo Noocyadaan xiriirrada qadiimiga ah ee horay uga jiray hadda kuma jiraan heerka kuwa hadda jira. Taasi waa sababta shakigu u soo ifbaxayo iyo talaabada ugu horeysa taas Waa inaan ogaanno haddii aad ugu yaraan soo jiidaneyso haweeneydaas.
Waxaad la kulantay iyada munaasabad kasta, xaalad kasta iyo xaflad asxaabtaada ah, laakiin haweeney iyo sidoo kale nin wuxuu had iyo jeer u diraa calaamadaha xiisaha haddii aad xiiseyneyso. Waxay kuxirantahay qofkasta sida uu uyaqaano sida loo fasiro, laakiin qodobkaan waan awoodnaa u hag si uu u fahmo dhammaan tilmaamahan yar.
Calaamadaha lagu garto haddii aad aniga i jeceshahay
Waa wax aan lagu doodi karin in muuqaalada si gaar ah kuu dul saaray, sii caddaynta ugu horreysa inuu isagu daneeyo. Haddii aysan jidh ahaan kaa xigin oo ay masaafo dheer hayso iyo waxaad mar labaad ogaatay inuu isha ku haayo adiga, markaa waa tilmaan weyn oo ah inay adiga ku soo jiiday. Markaad fool ka fool u kulantaan Xaqiiqdii indhahaaga kama fiiriyo, waa sababtaas darteed waa inaad u dhigantaa muuqaal kale. Haddii uu kuu dhoola cadeeyo waqtigaas ama uu hoos u eego xaqiiqda waxay noqon doontaa wax ka badan inta la xaqiijiyay.
Weydiiyaa su'aalo iyo qosol joogto ah
Gabadhu haddii aysan adiga ku xiisaynaynin waxay u badan tahay inaanay horumarin doonin qaddiyadaha madaxa ku jira. Haddii uu ku jecel yahay, wuxuu doonayaa inuu wax badan kaa ogaado, iyo ma jirto tilmaam ka wanaagsan oo aad weydiiso shaqadaada, hamigaaga, nooca gabadha aad jeceshahay, hiwaayadahaaga,…Waxaan ula jeedaa, yaa rabi doona inuu ogaado wax walba.
Haddii intaad sheekaysato had iyo jeer ku qoslaa waxaad leedahay iyo waxyaabo badan oo kaftankaaga ka mid ah, waa tilmaan muujineysa inaad iska dhigeyso inay runti adiga kaa heshay. Muhiimadu waa inaad kaa dhigto mid raaxo leh, laakiin haddii neerfayaashu khiyaano yihiin, waxaa laga yaabaa inay soo muuqato neerfis ama dhoola cadeyneyn.
Hadday danaynayso Wuxuu si isdaba joog ah isugu dayi doonaa inuu ku taabto. Hooggu waa tilmaam kale Taasi waxay kordhisaa fursadaha. Haddii gabadhu ay ka fogaato taabashada jirka oo ay kaa fogaato calaamado fiican maahan, waxaa laga yaabaa inay shaki qabto oo aysan ka tagi doonin caddeyn cad oo ah inay adiga ku jeceshahay.
Waxaad isku dayi kartaa qaab, laakiin si tartiib ah oo aan kadis ahayn. Isku day inaad taabato gacantiisa ama gacantiisa oo aad sugto jawaab celintiisa, sidan ayaad ku hubin doontaa inuu ku jecel yahay iyo in kale.
Dhaqdhaqaaqyo tilmaamaya inuu adiga ku jecel yahay
Oo faruuryaha qoyaya ama bushimaha qaniinaya inta ay hadlayso waa tilmaan muujineysa inay khiyaali tahay. Waa inaad fiiro gaar ah u yeelataa hadday si macaan u qabato, markuu dareenkiisa kugu hagaajiyo oo uu si deggan u hadlo. Waqtigan xaadirka ah wuxuu qiyaasayaa wax badan oo dhaafsiisan, wuxuu dareemayaa inuu kula jiro.
Hadey tahay haweeney timo dheer leh wey ku ciyaareysaa. Wuxuu timaha ka rari doonaa meel ka mid ah oo wuxuu u weecinayaa meel kale ama wuu ku shanleysan doonaa gacmihiisa. Waa hab lagu sasabto waxayna muujin doontaa inuu ku jecel yahay.
Isla sidaas ayaa ku dhici doonta saamaynta koobiga, Waa wax aan la dareemi karin laakiin haddii aad isku daydo oo aad aragto saameynteeda markaa waxaad arki doontaa inay soo jiidatay xitaa tilmaamahaaga. Iskuday inaad taabato gacan ama aad ka cabto cabitaankaaga, haddii uu sameeyo isla tilmaamtii horeba waad xaqiijisay.
Maanta waxa ugu badan ee aan isticmaalno waa WhatsApp. U fiirso sida aad u isticmaasho. Haddii uu si dhaqso leh uga jawaabo fariimahaaga waxay ka dhigan tahay wax haddii uu kula hadlo xitaa si isdaba joog ah waa adiga oo adiga ku xiiseynaya. Fiiri sida uu wax u qoro haddii aad isticmaasho emoticons badan oo aad naftaada ugu muujiso qaab soo jiidasho leh, Hagaag, xaqiiqdii wuxuu isku dayayaa inuu arko waxa uu dareemayo waqtigaas.
Luqad aan hadal ahayn
Waa luqadda loo turjumi karo iyadoo kuxiran booska jirkaaga. U fiirso lugaheeda iyo gacmaheeda, haddii ay adiga ku qanacsan tahay joogteyso muuqaal furan, adigoon ka tallaabin addimadaada. Isla taas ayaa ku dhici doonta booska aad ku leedahay, Hadday kuu soo jeestaan ​​oo jidhkoodu waxoogaa xaggaaga u janjeedho, caddayntu way cadahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Sideed ku ogaan kartaa inay gabadhu ku jeceshahay
Sida loo ilaaliyo xiriirka masaafada
Aabe leh cudurka Alzheimers, sidee ayaynu u daryeelnaa